Aarhus — တစ်လနေဖြင့်ရာသီဥတုက, ရေအပူချိန်
ကမ္ဘာ့ဖလား Resorts နိုင်ငံများ ဒိန်းမတ် Aarhus
Aarhus — ကိုပင်ဟေဂင် Aarhus — Esbjerg Aarhus — Odense Aarhus — Frederikshavn Aarhus — Aalborg Aarhus — Herning
ပျမ်းမျှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာ — 20.7°C ဇူလိုငျလ. ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာညဥ့်အခါ — 14.7°C သြဂုတ်လတွင်. ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာ — 3.2°C ဇန်နဝါရီလထဲမှာ. ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာညဥ့်အခါ — 0.8°C ဖေဖော်ဝါရီလက.
ရေပျှမ်းမျှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ — 17.9°C သတ်မှတ်ထားတဲ့ သြဂုတ်လတွင်. ရေပျမ်းမျှအပူချိန်ကအနည်းဆုံး — 1.8°C သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက.
အမြင့်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှု — 70.8 မီလီမီတာ ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ဇူလိုငျလ. နိမ့်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှု — 29.5 မီလီမီတာ ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ဖေဖော်ဝါရီလက.
သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ ဆက်သွယ်ရန် 2020 Meteodb.com. လများအတွက်အပန်းဖြေအပေါ်မိုးလေဝသ, ရေအပူချိန်, မိုးရွာသွန်းမှုပမာဏ။ ဘယ်မှာယခုရာသီငြိမ်ဝပ်စွာနေနှင့်ဘယ်မှာမှထွက်ရှာပါ။ Page load 0.0359 s. ▲